Havaianas FAQs | Central Service | Telephone
Ask questions ( F.A.Q. )
Company အကြောင်း ၊ Company Structure များအကြောင်းနှင့် မဟာဗျူဟာများအကြောင်း ပိုမိုသိလိုပါသည်။
Company အကြောင်း ၊ Company Structure များအကြောင်းနှင့် မဟာဗျူဟာများအကြောင်း ပိုမိုသိလိုပါက ယခုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။site: www.alpargatas.com.br
ဆပ်ပြာမှုန့်အနည်းငယ် ရောစပ်ထားတဲ့ရေထဲမှာမိနစ်အနည်းငယ်မျှစိမ်ထားပေးပါ။ နူးညံ့တဲ့ Brush သို့ သွားတိုက်တံအဟောင်းနှင့် ညစ်ပေမှုတွေကို စင်ကြယ်သန့်ရှင်းပေးပါ။ ဖိနပ်သဲကြိုးနှင့် အောက်ခံတွေ ပျက်စီးတတ်လို့ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲမှာမလျော်ပါနဲ့။
Havaianas ဖိနပ်တစ်ရံသည် မည်မျှကာလထိအကြမ်းခံသည်ဟူ၇်ျ အတိအကျမရှိပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖိနပ်တစ်ရံ၏ကြာရှည်ခံမှုသည်အကြောင်းအရာအများကြီးပေါ်မူတည်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲတဲ့အကြိမ်ရေ ၊ သုံးစွဲပုံ ၊ ဖိနပ်ကိုဂရုတစိုက်ထားရှိပုံနှင့် နင်းလေ့ရှိသည့် ကြမ်းပြင်တို့နှင့်မြေပြင်တို့ပေါ်မူတည်ပါသည်။
Havaianas Collections အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ပမာဏအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်လေ့ရှိပါသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ ပုံစံအမျိုးအစားပေါင်း ၉၀ ကျော်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး အမျိုးသား ကလေး နှင့် အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ စီးလို့ရတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုတော့ https://www.facebook.com/Havaianas-1217663428325940/ မှာကြည့်လို့ရပါတယ်
တယ်ဖိနပ်ပုံစံအသစ်တွေဘယ်အချိန်မှာစထွက်လေ့ရှိပါသလဲ Havaianas ပုံစံသစ်တွေကို June လတိုင်းမှာ အသစ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး ပုံစံသစ် ကာလာအသစ်တွေကိုတော့ အခြားလတွေမှာစထုတ်ပါတယ်။ Summer Collection အတွက်ကိုတော့ အောက်တိုဘာ နှင့် နိုဝင်ဘာလမှာ ဖြန့်ချီလေ့ရှိပါတယ်
၀မ်းနည်းပါတယ် Havaianas မှဖိနပ်သဲကြိုးတွေကို သီးသန့်ရောင်းလေ့မရှိပါဘူး
Manufacturing problems - Havaianas ဖိနပ်တွေက အရည်အသွေးမပြည့်မီပဲဆိုရွားနေခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
Please, contact the Authorized Distributor of your country.
Havaianas products –Sandals အပြင် အခြားဘာ Product တွေရှိသေးလဲ
In addition to the sandals, Havaianas hasaline of closed shoes, accessories and alsoaline of clothing.
Direct sales - Havaianas ကိုစက်ရုံကနေတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလို့ရပါသလား
Havaianas at the section Online Store (check availability in your country). မှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်
Alpargatas မှ Havaianas ဆိုင်များမှရောင်းချတဲ့ဈေးနူန်းကိုထိန်းချုပ်မထားပါဘူး။ နီးစပ်ရာဆိုင်များမှာသာ သင့်အတွက်ပိုပြီးသင်တင့်မျှတတဲ့ဈေးနူန်းနဲ့ရရှိနိုင်အောင် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်
Havaianas ဖိနပ်တွေကို အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းထုတ်လုပ်ပါသည်။
The Havaianas factory is located in Campina Grande, the second most populated town in the State of Paraíba, with approximately 371 thousand inhabitants. Distant 120 km from the capital, João Pessoa, it is considered one of the main industrial and technological centers in Northeastern Brazil. In 2013, Montes Claros (MG) factory was opened.
Quality tests – Havaianas ဖိနပ်တွေရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးပါသလဲ
Havaianas ဖိနပ်တွေရဲ့အရည်အသွေးတွေကို စက်ရုံမှ ဆိုင်တွေပေါ်သို့မရောက်မီအထိ အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဖိနပ်သဲကြိုးအရည်အသွေး ခံနိုင်ရည်အား နူးညံ့မှု သိပ်သည်းမှု အရောင်အရည်အသွေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသက်တောင့်သက်သာရှိမရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး စစ်ဆေးခန်းမှ စနစ်တကျစစ်ဆေးပြီးမှသာ ဆိုင်တွေ customer တွေဆီကိုအရောက်ပို့လေ့ရှိပါတယ်
Why do Havaianas fit two sizes?
Havaianas are flip-flops,atype of sandal. As it is an open shoe, we were able to make Havaianas fit two sizes, with no comfort loss. Some models - Havaianas High, for instance - have different characteristics and therefore they bearatraditional size choice, each pair fits one size only.
Havaianas မှာဘယ်လို Size တွေရရှိနိုင်ပါသလဲ
Havaianas မှာရရှိနိုင်မယ့် sizes တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
The vast majority of Havaianas models are made in suchaway that allows each size to comfortably fit two conventional sizes.
Each model has its specific sizing, but in general, the sizes follow this range:
Baby: 17/18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23/24 ;
Kids: 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 ;
Adults – Female: 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 ;
Adults – Male: 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46.
To seeaspecific model, visit our Online Store (check availability in your country).
Sponsorship, Fairs, Events and Exhibition Proposals
Sponsorship, Fairs, Events and Exhibition Proposals တွေအတွက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ
mmhavaianasmanager@gmail.com (သို့မဟုတ်) bdt.digitalmarketing@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
Is it possible to register to receive information?
The company does not adopt such procedure. We suggest that you regularly access our site to be constantly aware of what is going on in the Havaianas world.
Tokens and Samples – Is it possible to receive them?
Thank you for your interest in our products, but we have no samples and tokens available for dispatch.
Special Request / Custom Sandals
Personalized Havaianas for consumers - Wedding , Birthday နှင့် Graduation အစရှိသော အထိမ်းအမှတ်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းမှာယူလို့ရပါသလား
Wedding , Birthday နှင့် Graduation အစရှိသော အထိမ်းအမှတ်များအတွက် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းမှာယူလို့ရပါတယ်။ မှာယူရန်အတွက်တော့ ၃ လမှ ၄ လအတွင်းကြိုတင်အကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးဖိနပ်အရံ ၃၀၀ မှာပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဈေးနူန်းကတော့မှာယူတဲ့အရောင်နဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် pehavaianas@alpargatas.com.br (သို့) mmhavaianasmanager@gmail.com သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Company တော့မရှိပါဘူး ဒါပေမယ့် amount အများကြီးအတွက်မှာယူလိုပါက ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ
Havaianas ဖိနပ်များကို ပမာဏ များပြားစွာဝယ်ယူလိုပါက mmhavaianasmanager@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Export and Shopping Abrod
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ Havaianas ဖိနပ်တွေဘယ်လိုဝယ်လို့ရမလဲ
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ Havaianas ဖိနပ်တွေဝယ်ယူလိုပါက International Sites ယခုလင့်ခ်သို့ဝင်ရောက်ပြီး သင်ရှာဖွေနေတဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပါ။ သင်ရွေးချယ်တဲ့နိုင်ငံ၏ Havaianas ဆိုင်တည်နေရာ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်တွေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်
films and ads တွေကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်နိုင်မလဲ
Films and ads with exhibition rights are available in the Advertising section of this site.
We are glad that you care for Havaianas. Alpargatas S.A. has specific departments for product creation and development, campaign development and strategic market analysis.
ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံး Havaianas ဆိုင်ဘယ်မှာရှိပါသလဲ
ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံး Havaianas ဆိုင်ဘယ်မှာရှိပါသလဲ မိမိနှင့်အနီးဆုံး Havaianas ဆိုင်မည်မှာရှိသည်ကို သိရှိရန်အတွက် Where To Buy ဆိုသည့် section သို့သွားပါ။ သင်ရှာဖွေနေတဲ့မြို့မှာ Havaianas ဆိုင်မရှိရင်ဆိုရင်တော့ Customer Service ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံး Havaianas ဆိုင်ဘယ်မှာရှိပါသလဲ မိမိနှင့်အနီးဆုံး Havaianas ဆိုင်မည်မှာရှိသည်ကို သိရှိရန်အတွက် Where To Buy ဆိုသည့် section သို့သွားပါ။ သင်ရှာဖွေနေတဲ့မြို့မှာ Havaianas ဆိုင်မရှိရင်ဆိုရင်တော့ Customer Service ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။
မိမိလိုချင်တဲ့ ဖိနပ်ပုံစံအတိအကျကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ
To view the complete collection available in Brazil, please go to our Online Store or visit our Concept Store. You can also contact our Customer Service in the section Talk to us. We will then suggest some stores available near you.
CV ပေးပို့လိုပါက ယခုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပို့ပါ here.
Academic Work - How can information be obtained?
A lot of information requested by students deal with strategic issues of the company and cannot be disclosed. To better serve you, we have developedamaterial containing various historical and current information on Havaianas.
Enviroment and Social Responsability
How can I request resources?
Alpargatas hasastrong social performance through Instituto Alpargatas. The institute's to improve, by means of sports, the educational quality of children and teenagers from the communities where the company operates. In case you haveaproject that fits the scope of activities of our Institute, and you want to present it to Alpargatas, please contact us through the site: www.institutoalpargatas.com.br. Due to the great number of projects in which we are already involved, we cannot guarantee our support to all projects that are submitted to us.
In the Annual Report by Alpargatas there isachapter dealing exclusively with Social and Environmental Responsibility. You can see the digital version of the report at site.
What are Havaianas initiatives and actions?
Alpargatas has chosen as its first priority to develop and implementaprogram on work safety, occupational health and environment (SSMA), and later on, on due time and according to the maturity of its several units around the country, to seek certification. As to SSMA, we have createdapolicy that permeates all levels within the organization, allowing the implementation of various activities that aim atasustainable development.
Actions such as selective garbage collection, control of generated residue, adequate transportation and destination of residue, actions to reduce electricity and water consumption, sensible development of materials to be used in our products, launch of ecological product lines, rubber residue recycling, co-processing of non-recyclable residue, recycling of PVC residue during the production process, environmental education for all of our employees, among other activities. For further information on the company's social actions, please visit the Instituto Alpargatas.
If you do not find answer to your questions here , please contact our Customer Service
09H - 18h(Monday to Friday)
Questions , suggestions , compliments or complaints ?